Ethiopia oo Diyaar u ah Qabashada Shirka AIDS-ka iyo Cudurada Galmoodku Keeno – Rasaasa News
Ethiopia oo Diyaar u ah Qabashada Shirka AIDS-ka iyo Cudurada Galmoodku Keeno
Nov 22, 2011 Ethiopia oo Diyaar u ah Kulanka ICASA
Addis Ababa, November 22, 2011 [ras] – Dawlada Ethiopia ayaa sheegtay in ay dhamaystirtay u diyaar garowga shirkii ugu balaadhnaa ee abid lagu qabto dalka, marka laga eego dhinaca tirada dadka ka qayb galaya.
Kulanka caalamiga ahaa 16aad ee arimaha AIDS iyo Cudurada Faafa ee la Isug gudbiyo Galmoodka [ICASA], ayaa lagu qaban doonaa Addis Ababa 4 December ilaa iyo 8, waxaana la filayaa in ay ka qayb gali doona 10, 000 oo ruux oo ka kala imanaya aduunka oo dhan.
Ethiopia waxay hore u marti galisay shirar caalami ah, laakiin tirada ugu badan ee ka qayb galayaashu kama badnaan jirin 3,000. Ethiopia ayaa aad ugu faraxsan dhacdadan jecelna in ay aduunka tusto soo dhawayn iyo awoodeeda in ay qaban karto kulamada balaadhan ee caalamiga ah.
Gudoomiyaha gudiga abaabulka kulanka Dr, Tewodros Adhanom, ahna wasiirka caafimaad ayaa 17 November shir jaraa,id oo ku saabsan hanaanka iyo diyaarinta shirka ku qabtay Addis Ababa. Waxaa uu sheegay wasiirku in ay xaliyeen arimihii ugu mudnaa, arinta ugu wayna waxay ahayd sidii loo heli lahaa hoyaad la socon kara kuwa caalamiga ah.
“Waxaanu hubinay in ka badan 10,800 qol oo leh tayo sare oo ku yaal Addis Ababa, kuwaas oo siin doona adeeg, dadka ka imanaya aduunka oo dhan.” “Sidaas daraadeed, xaga arimaha meelaha ay degi doonaan wufuudu dhibaato kama jirto,” ayuu yidhi wasiirku.
4,200 oo ka qayb gale, ayaan ilaa iyo hada xaqiijinay imaanshahooda. Laakiin wali ma ayna dhamaanin is diiwaan galintu.
Dr. Tewodros waxaa uu sheegay in ay shaqo dib u qaabayn ah ku socoto guriga Miilaadiyada [Millennium Hall], halkaas oo loo qorsheeyey in uu shirku ka dhaco, waxayna xaruntu ku qalabaysan tahay teknoolojiyad sare iyada qaadi kartaa markiiba 35,000 oo ruux.
Wasiirku wuxuu sheegay in madaxda shan wadan iyo wasiiro kala duwan ay ka qayb qaadan doonaan shirkan caalamiga ah. Waxaana ku jiri doona kulanka baadhis bandhigeed iyo macluumaad saynis ah.
33.3 milyan oo ruux ayaa sida feeraska HIV aduunka, tiradaas oo 68% ay joogaan Afrika. 33 wadan ayey tirada dadka qaba feeraska hoos u dhacday in ka badan 25%, intii u dhaxaysay sanadihii 2001 iyo 2009, 22 ka mid ah dalalkan waa wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika.
Cudurada kale ee kulanka laggaga hadli doono waxaa ka mid ah HIV,AIDS,STIs,TB iyo Malariya.
Adeegto Ethiopian ah oo Kurga ka Goysay Haweeney ay u Shaqaynaysay